Bruno Fernandes oo markale Aabbe noqday – Gool FM
Xiddig horay ugu soo ciyaaray Barcelona oo kashifay sababtii rasmiga ahayd ee ka dambeysay in la iibiyo Ronaldinho iyo Deco & doorkii uu Messi ku lahaa sheekadaas!
Xiddig hore kooxda Chelsea ah oo si weyn loola xiriirinayo inuu yahay musharaxa ugu cad cad ee kursiga tababare Frank Lampard
Kaddib guuldarradii xalay ka soo gaartay Leicester City Frank Lampard oo weerar ku qaaday ciyaartoyda kooxda Chelsea
Horudhac: Juventus vs Napoli… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Supercoppa Italiana)
Horudhac: Fulham vs Manchester United… (Red Devils oo doonaysa inay waddada guusha dib ugu soo laabato kaddib barbarihii Anfield)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Leicester City iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Bruno Fernandes oo markale Aabbe noqday
Haaruun September 6, 2020
(Yurub) 06 Seb 2020. Xiddiga khadka dhexe kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Portugal ee Bruno Fernandes ayaa markale Aabbe noqday xalay.
Bruno Fernandes ayaa saacado kaddib markii uu dhameystay kulankii uu xulkiisa qaranka Portugal la ciyaaray Croatia ee UEFA Nations League, waxa uu helay canugiisa labaad oo ay u dhashay xaaskiisa Ana.
25 jirkan ayaa wiilkiisa cusub ee dunida ku soo biiray waxaa loo bixiyay Goncalo, waxaana uu dhashay 12.30am saqdii dhexe ee xalay, afar sacadood kaddib markii uu xiddiga kooxda Manchester United uu dhameystay kulankii xulkiisa qaran Portugal uu guusha ku qaatay garoonka Estadio do Dragao.
Fernandes iyo xaaskiisa ayaa horey u heystay gabadh saddex sano jir ah oo la yiraahdo Matilde, taasoo dabaal dega dhalashadeeda ay ku beegneyd si isku mid ah maalintii uu xiddiga reer Portugal ku biiray kooxda Manchester United bishii Janaayo 31.
Si kastaba ha noqotee, xulka qaranka Portugal ayaa xalay kaga adkaaday dhigooda Croatia, kulankii UEFA Nations League 4-1, la’aanta kabtankooda Cristiano Ronaldo.
Manchester City oo heshiis shaqsi ah la gaartay Kalidou Koulibaly
LAYAAB: Koobka qarammada qaaradda Afrika oo lagu xaday dalka Masar